Cashier Job Ọrụ Nkọwa Nkọwapụta ọrụ ọrụ ego kachasị arụ ọrụ bụ ijikwa ego na ịkwụwa aka ọtọ kachasị na mmejọ kachasị , okwesiri inwe ụdị ihe omuma nke mgbakọ na mwepụ & Usoro nkwekọrịta iji rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi . Ihe omuma nke Igwe Ntanye ego dika POS system. Gestured customers …
Services, ugwu, weghachi ego, nri, ma ọ bụ ntụrụndụ na ígwè ọrụ gụnyere video egwuregwu, juke igbe ma ọ bụ oghere igwe, ma ọ bụ ịgbanwe. Ọrụ Nkà Iwu jupụta igwe eji bekee, ngwaahịa, ego, nakwa dị ka ihe ndị ọzọ. Nọgide Na-enwe ihe ndekọ nke ihe ndị ekenyela na dollars anakọtara. Enweta ego mmefu si ngwaahịa, kwadebe akaụntụ, na ná mma …
Agba ọsọ na-anọgide na-ịnọgide na-enwe na-ejide ngwaahịa, agbapụ àkụ mee, na metụtara anụ ahụ, haịdrọlik, na-achịkwa-usoro chọrọ isi na ụgbọelu ụlọ ọrụ takeoff na ọdịda ọrụ. Ọrụ na-agụnye na-agbakwụnye na-akwagide image ọdịda enyere; anwale na-echebekwa mmalite na mgbake ngwá ọrụ electric na n'ibu ule gia na n'aka ngwaọrụ; wetere airfield ijide usoro, …
Mee Resonance Imaging (MRI) foto. Nyochaa ndidi nche na nkasi obi . Nwere ike ijere gadolinium iche onunu ogwu intravenously. On akafiakde guzo MRI ụzọ na-, kọwara nwere ike ajụjụ ọnụ onye, na ebe ọrịa. Ka itinye kọmputa data dị otú ahụ dị ka ọrịa nketa, itinye n'ọnọdụ kpọmkwem, ndu region ka a scanned, na ebe nke …
Akwalite ego-ọrụ, dị ka ihe atụ mortgage, chepụtara echiche, na investments nduzi-ejere nke ichekwa ego na bank oru na ụlọ ọrụ achụmnta ego. Ọrụ Nkà mkpa Kpebie shoppersA ego ọrụ mkpa na-akwadebe na-atụ aro na-enye ndị na enye na nwaa ndị a chọrọ. Kpọtụrụ nwere ahịa na-enye ihe mere eme na-akọwa ihe ngwọta na-awa. ere …
Direct na ike isonye na nkwadebe, herbs, na-akwadebe nke muffin azụ, meats, akwụkwọ nri, salads, ma ọ bụ ọzọ ihe oriri. Ka kwadebe na-eri nhọrọ ihe, ịzụta ngwaahịa, ma na-enwe data na akaụntụ. Job Nkà Mkpa Nyochaa njikere ma ọ bụ raw nri ngwaahịa’ ọkwa iji jide n'aka na ibiere na-enweta. Nyochaa …
Exchange ego, tokens, na ibe maka customersA dollars. Pụrụ inye nweta mbinye aka nke asịwo na ụgwọ na ụgwọ. Nwere ike ịgụ na ụtụ isi ego na-ose, ma ọ bụ na-arụ ọrụ a cubicle na oghere igwe ebe na-enye ego akụ ịgbanwe folks site na mmalite nke aga. ọrụ Nkà …
Physicians ndị na-enye nlekọta ahụ ike na ego jikọrọ ọrụ ma ọ bụ onodu na ndị na-ịchọpụta, aka, na-enyere aka igbochi ọnọdụ nke ladies, karịsịa ndị na-akpali ndị amụba usoro. Nwekwara ike na-enye n'ozuzu ọgwụ ndị inyom. Job Nkà iru eru Lezie na adreesị ladies. Ikpughe usoro ma na-atụle …
Sleek na imecha ihe ciment ahụ a gwakọtara, n'ihi na ihe atụ flooring ekwo ekwo, ụzọ, ma ọ bụ curbs ọrụ a nhọrọ nke aka na ike ngwá. Ndokwa iche banyere ekwo ekwo ma ọ bụ gutters; kwachie voids; na-eji ịwa nkume ka iberi mgbasa nkwonkwo. Ọrụ Nkà iru eru Nyochaa ụdị na-akwado ndị gbara ọkpụrụkpụ na-na …
Were x pusi na ụzarị enyocha kwa ma ọ bụ ijere nonradioactive onunu n'ime patientis ọbara iyi n'ihi ihe ndị na-achọpụta ọrịa. Agụnye Technologists onye-elekwasị anya na ọzọ na azum na-ịgụ isiokwu. Ọrụ Nkà iru eru Evaluation na-enyocha kere x-ụzarị, teepu na video, ma ọ bụ pc -developed ọmụma ma ọ bụrụ ndịna ndị zuru ezu banyere …
Page 1 nke 9912345 » 102030...ikpeazụ »